← साइबर जाँदा परिचयपत्र अनिवार्य	सिएनएनमा नेपाली हिरो →	सफलताको निम्ती जान्ने पर्ने आठ अक्षर	22
T-टार्गेट अर्थात् लक्ष्य ः यदि आफ्नो लक्ष्य निर्धारित छ भने कहिल्यै निराशा वा असफलताको मुख हेर्नु पर्दैन। आफूले के काम गर्नुपर्छ, कस्तो घर बनाउनु छ, कुन ठाउँमा बस्नु छ, भन्ने निर्धारण गर्नु आवश्यक छ । बाँकी काम सजिलै सम्पन्न हुन्छ। साथै यसको विकल्प पनि तयार राख्नुपर्छ। लक्ष्य स्पष्ट छ भने त्यसको प्राप्ति पनि सहज हुन्छ। तर म इन्जिनियर बनिन भने चिकित्सक बन्छु वा संगीतमा लाग्छु, त्यो पनि भएन भने टिचिङ गर्छु नभए घरेलु जीवन जिउँछु भन्ने खालको लक्ष्य भने बनाउनुु हुँदैन। I-आइडल अर्थात् आदर्श ः आफ्नो व्यक्तित्वलाई यसरी निखार्नुपर्छ कि अरूका लागि त्यो एक आदर्श बनोस्। कठिन परिस्थितिमा पनि आफ्नो मानसिक सन्तुलन कायम राख्नुपर्छ । हरेक स्थितिमा खुसी रहने, अरूको सुख-दुःखमा सहयोगका लागि तत्पर रहन हो भने आफू कोही आदर्श व्यक्तिभन्दा कम भइँदैन । हामी आफ्ना गुरु, आमाबुवालाई आदर्श किन मान्छौं ? पक्कै उनीहरूमा आफूलाई प्रभावित गर्ने गुण र विशेषता छ । यस्तो हो भने आफू पनि अरूका लागि आदर्श बन्ने प्रयास किन नगर्ने ?
साभार नारी पत्रिका Like this:Like Loading...
← साइबर जाँदा परिचयपत्र अनिवार्य	सिएनएनमा नेपाली हिरो →	जवाफ लेख्नुहोस् जवाफ रद्द गर्नुहोस्	Enter your comment here...